Dolinas: kedu ihe ha bụ, nhazi, njirimara na ọtụtụ ndị ọzọ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 17/11/2021 10:00 | Geology
Na geology, e nwere ụdị nhazi dị iche iche. Nke ọ bụla nwere njirimara na mmalite ya pụrụ iche. Otu n'ime ha bụ sinkholes. Nke a bụ usoro dị ize ndụ ma ọ bụrụ na ọ na-ejide anyị. Ma ọ bụ na ọ bụ ụdị ịda mbà n'obi nke mbara ala nke na-eme na gburugburu ebe obibi na nke nwere ike ịmalite n'etiti ọwa mmiri ma ọ bụ n'ebe ọ bụla ọzọ.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere sinkholes, ha àgwà na e guzobere.
1 Nhazi nke sinkholes
2 Ebe ha na-eme
3 Ọmụmaatụ nke sinkholes
4 Enyemaka na geology
Nhazi nke sinkholes
Oghere mmiri ndị ahụ bụ olulu mmiri dị n'okpuru ala, nke a na-eme n'ebe a na-adọba ụgbọala, ma ọ dịghị usoro nkwụsị nke mpụga, ya mere mmiri na-amalite imebi ihe ọ bụla na-agafe, ma ọ bụ oghere dị n'okpuru ala ma ọ bụ asphalt n'onwe ya.
Enwere ụdị atọ: ụdị ọhịa, ụdị mkpuchi na ọdịda ụdị. Ọ na-emekarị mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ihe onwunwe ma ọ bụ ahịhịa dị n'ala, ya mere mmiri na-amalite ịgbaze n'elu ma mesịa ghọọ olulu mmiri. Ihe mkpuchi na-eme mgbe enwere ájá na mgbe mmiri na-abanye n'ime ihe ahụ, mmiri na-asọda ala. Ụdị ọdịda ahụ bụ nke kachasị dị ize ndụ, n'ihi na sediments na-amalite ịmalite n'amaghị ama, ruo mgbe oyi akwa n'ikpeazụ na-agbaji na ihe niile dị n'akụkụ ya dabara n'olulu mmiri gwuru.
N'ezie, ọdịdị ya metụtara ihe ndị sitere n'okike, ọrụ mmadụ na mmiri. Na-abụkarị mmiri sitere na nnukwu mmiri ozuzo ma ọ bụ mmiri dị n'ihi oke oke osimiri dị na mpaghara ahụ ga-emecha metụta otu n'ime ala nkume dị n'okpuru ala, ya bụ. jisie ike ịgbanwe ụfọdụ na-abụghị elu n'ígwé. Mgbe nke a mere, ihe abụọ nwere ike ime nke na-eduga n'ịkpụpụta sink.
Nke mbụ, ọ nwere ike ime na e nwere ọgba n'okpuru ala nke anyị na-aga n'ihu, ọ bụ ezie na anyị amaghị ya, nakwa na ọ na-emetụta elu ụlọ. Nke a nwere ike ịbụ nbibi nke elu nke na-ada ma mechaa kpughee ya. Na nke abụọ ikpe o nwere ike ime n'ihi na ọ dịghị ọgba, na omume nke mmiri na-agbaze nkume na-ejidesi ala ike, ma na-emekwa ka ọ daa, na-eke abis ndị a dị n'ụwa.
Ebe ha na-eme
Ọ bụrụ na adọ ndị ọchịchị aka ná ntị, ha nwere ike ịhụ akara okporo ụzọ na-adọ aka ná ntị maka adịghị ike ndị nwere ike ime. Ma ọ bụghị ya, ṅaa ntị na ala, n'ihi na enwere ike ịnwe mgbawa na obere akara gouge. Ụzọ ọzọ ị ga-esi chọpụta nke a bụ ma ọ bụrụ na ị hụ osisi na-eto eto n'akụkụ mgbawa. pụtara na mmiri dị n'okpuru.
Enwere ọtụtụ olulu mmiri n'okpuru mmiri na-adọrọ mmasị, ma enwere ụfọdụ ndị ị nwere ike ịga leta ma ọ bụrụ na ị na-eme njem nlegharị anya. A na-akpọkarị ndị a "oghere na-acha anụnụ anụnụ" na-ekpuchi nnukwu ebe. Ka ihe atụ, Pozzo del Mero na Italy bụ fọrọ nke nta 400 mita miri na Blue Hole nke Dean na Bahamas na-emikpu ihe karịrị mita 200.
Ihe dị n'akụkụ mmiri mmiri bụ na ha dị ize ndụ. N'ezie, ihe niile dabere n'ụdị sinkholes na-etolite, ma n'obodo ukwu ha na-adaba ruo n'ókè nke ịda, nke mere na ha na-emecha na-eduga ọnwụ nke ndị na-agafe agafe na-atụghị anya ya, na ihe mere ọtụtụ ụgbọ ala na-ada n'ala na omimi. Ihe kachasị njọ bụ na ozu nke ọtụtụ ndị mmadụ nke sinkhole loro, n'ihi na ókèala ahụ adịghị mma, agaghị enwetaghachi ya.
Ọmụmaatụ nke sinkholes
Nnu nkume nke gbara Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ gburugburu ma ọ bụ nkume nzu nke Yucatan Peninsula na Mexico bụ ihe atụ abụọ ọzọ dị mma nke nhazi nke sinkholes n'ụwa. Na Spain, otu n'ime sinkholes okike a ma ama na nke mara mma bụ Torcas del Palancar nke dị na mpaghara Cuenca, nke. Ọ bụrụla ihe nkiri nlegharị anya na-enweghị atụ na Ogbe kwụụrụ onwe nke Castilla-La Mancha.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụghị ala niile na-adịkarị mfe imi. N'ezie, etymology nke okwu dolina sitere na Slovenian, n'ihi na ọ dị mfe ịchọta ha na mpaghara ndị a, karịsịa na mpaghara Carso. Nke a bụ n'ihi ụdị ala ha nwere, nke mejupụtara usoro okwute dị iche iche, dị ka nkume limestone ma ọ bụ gypsum, nke n'aka nke ya bụ mineral na-agbaze mgbe ha rutere na mmiri. Ụdị enyemaka a ka a na-akpọ karst relief, na-ahapụ ọmarịcha odida obodo anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya.
Ọzọkwa, Enwere ọtụtụ ụdị sinkholes nwere ike ịmepụta. Dịka ọmụmaatụ, sump bụ ụdị sump okirikiri nke a na-eji dị ka ọwa mmiri mmiri ozuzo na obere osimiri; Tollos na-adịkarị na mpaghara Castilla y León, dị ka sinkholes, mana mmiri ha na-anakọta ga-etolite ngwa ngwa. Ụdị nkume ahụ na-etinye ha obi.
Enyemaka na geology
Nhazi nke sinkholes na-eme n'ime ala nke nkume ndị na-adịghị na-emepụta site na ụrọ na nkume nzu, n'ihi ya, nke a abụghị nanị usoro na mpaghara calcareous. Nke a na-eme mgbe akụkụ nke mmiri ozuzo na-aghọ mmiri dị n'ime ala ma na-asọba n'okpuru oke nkume n'otu oge ahụ ka oke nke na-agafe na ya.
N'ihi na mmiri ozuzo nwere carbon dioxide sitere na ikuku, carbonation na-apụta. Carbon dioxide a na-emeghachi omume na calcium hydroxide na nkume ma hapụ mmiri na calcium carbonate. Ya mere, Ọ bụrụhaala na mmiri ahụ ruru ego achọrọ, nkume ndị ahụ ga-agbaze ma dozie.
Ihe ndị a bụ ihe ndabere maka mmalite kast modeling, nke mere ka e guzobe sinkholes. Mmiri dị n'elu na mmiri ala na-eji nwayọọ nwayọọ gbazee nkume ndị ahụ. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta veranda na ọgba ndị na-ejikọta mmiri abụọ ahụ.
N'ihi mgbaze nke nkume ahụ nke nta nke nta, nhazi ya nwere ike ịdị ngwa ngwa ma ọ bụ ọ nwere ike ịmalite na mberede n'ihi ọdịda nke ọgba n'okpuru ala. N'okwu nke abụọ, ọ na-anọchi anya nnukwu ihe egwu maka ụlọ ndị dị na ala ahụ metụtara.
N'ihe dị ka otu afọ gara aga, otu n'ime ihe ndị a pụtara na Guatemala, bụ nke kpatara egwu na, dị ka mgbe niile, bịara na nkwubi okwu ngwa ngwa na nke na-ezighị ezi dabere na echiche na ihe mgbu afọ ofufo nke anyị kwenyeworo. Ihe ndị a sị na ọ bụ ọdachi na-abịa na-echi anyị anya mgbe nile, ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe nwere ike ịkpata anyị enweghịkwa ike ikwu okwu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere sinkholes na àgwà ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Dolina